မြက်နုဇာတ်ကားထဲမှာ ချာတိတ်မလေးပုံစံပီပြင်အောင် ဖက်ရှင်အလန်းတွေဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် – Cele Gabar
မြက်နုဇာတ်ကားထဲမှာ ချာတိတ်မလေးပုံစံပီပြင်အောင် ဖက်ရှင်အလန်းတွေဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နဲ့အသားအရည်လှပပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေးကတော့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ပါ။အသက်နဲ့မလိုက်အောင်နုပျိုအလှသွေးကြွယ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အသိအမှတ်ပြုခံထားရသလို ဆယ်ကျော်သက်ဇာတ်ရုပ်တွေကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုရုံတင်နေတဲ့ မြက်နုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဆိုရင်လည်း ချာတိတ်မလေးဂျိတ်အဖြစ်နဲ့ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီဇာတ်ကားဟာ ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့မယ့် Romance Drama ဇာတ်ကားဖြစ်သလို ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်က လိုက်ဖက်ညီညီသရုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ကြည်နူးဖွယ်ခံစားမှုတွေနဲ့ကြည့်ရှု့ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မိမိမိုက်မိုက်ဆယ်ကျော်သက်မလေးပုံစံပီပြင်အောင် ဝတ်စားဆင်ယင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ပွဲတက်အခမ်းအနားတွေတက်တဲ့ အချိန်တွေမှာဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲပဲဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရှင်ကျအာင် ဝတ်စားဆင်ယင်လေ့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဇာတ်ကားထဲမှာလည်း အထာကျကျချာတိတ်မလေးရဲ့ဖက်ရှင်တွေက အပိုအလိုမရှိတဲ့အပြင် ဆံပင်ကုပ်ဝဲလေးရယ် မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေက ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ ဖက်ရှင်တွေဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။ပရိသတ်တွေကတော့ မြက်နုဇာတ်ကားလေးကို စီးမျောကြည့်ရှု့ရင်း ရွှေကစ်ရဲ့အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေက ဖမ်းစားခြင်းခံရတော့မှာ သေချာနေပါပြီနော်….
Source : မြက်နု ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
Rose – CeleGabar
ျမက္ႏုဇာတ္ကားထဲမွာ ခ်ာတိတ္မေလးပုံစံပီျပင္ေအာင္ ဖက္ရွင္အလန္းေတြဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္
ပိန္ပိန္သြယ္သြယ္နဲ႔အသားအရည္လွပျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလးကေတာ့ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ပါ။အသက္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ႏုပ်ိဳအလွေသြးၾကြယ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသလို ဆယ္ေက်ာ္သက္ဇာတ္႐ုပ္ေတြကို သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တုန္းျဖစ္ပါတယ္။
အခု႐ုံတင္ေနတဲ့ ျမက္ႏု႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာဆိုရင္လည္း ခ်ာတိတ္မေလးဂ်ိတ္အျဖစ္နဲ႔ပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ဒီဇာတ္ကားဟာ ပရိသတ္အႀကိဳက္ေတြ႕မယ့္ Romance Drama ဇာတ္ကားျဖစ္သလို ထိပ္တန္းသ႐ုပ္ေဆာင္ႏွစ္ေယာက္က လိုက္ဖက္ညီညီသ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ၾကည္ႏူးဖြယ္ခံစားမႈေတြနဲ႔ၾကည့္ရႈ႕ရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ကေတာ့ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ မိမိမိုက္မိုက္ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလးပုံစံပီျပင္ေအာင္ ဝတ္စားဆင္ယင္တာကိုေတြ႕ရမွာပါ။
ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ကေတာ့ ပြဲတက္အခမ္းအနားေတြတက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြထဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖက္ရွင္က်အာင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ေလ့ရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။အခုဇာတ္ကားထဲမွာလည္း အထာက်က်ခ်ာတိတ္မေလးရဲ႕ဖက္ရွင္ေတြက အပိုအလိုမရွိတဲ့အျပင္ ဆံပင္ကုပ္၀ဲေလးရယ္ မိတ္ကပ္အျပင္အဆင္ေတြက ေခတ္ေရွ႕ေျပးတဲ့ ဖက္ရွင္ေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါၿပီ။ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ျမက္ႏုဇာတ္ကားေလးကို စီးေမ်ာၾကည့္ရႈ႕ရင္း ေ႐ႊကစ္ရဲ႕အမိုက္စားဖက္ရွင္ေတြက ဖမ္းစားျခင္းခံရေတာ့မွာ ေသခ်ာေနပါၿပီေနာ္….
“မိုက်မိုက်မဲမဲချစ်ကြတဲ့ လူ(၃)ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းအားပြိုင်မှုတွေ မြင်တွေ့ရမယ့် “မိုက်မဲချစ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Official Trailer”